Etu esi ebudata ihe oyiyi sitere na Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS imagery na isi mmalite ndị ọzọ - Geofumadas
Febụwarị, 2019 Apụta, Google Earth / Maps, virtual Earth
Maka ọtụtụ ndị nyocha ahụ, ndị chọrọ iwu maapụ ebe edepụtara raster site na ikpo okwu ọ bụla dịka Google, Bing ma ọ bụ ArcGIS imagery gosipụtara, anyị ji n'aka na anyị enweghị nsogbu ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpo okwu ọ bụla nwere ohere ịnweta ọrụ ndị a. Mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ibudata onyogho ndị ahụ na mkpebi dị mma, kedụ ihe ngwọta dị ka StitchMaps na-apụ, n'ezie ihe ngwọta kasị mma bụ SAS Planet.
SAS Ụwa, bụ mmemme n'efu, nke sitere na Russia, nke na-enye gị ohere ịchọta, họrọ ma budata ọtụtụ onyonyo site na nyiwe ma ọ bụ sava dị iche iche. N'ime sava ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta Google Earth, Google Maps, Yahoo, Bing, Nokia, Yandex, Navitel Maps, VirtualEarth, Gurtam na overlays nwere ike ịgbakwunye na ihe oyiyi ahụ, dịka aha ma ọ bụ akụkụ okporo ụzọ - ihe a na-akpọ ngwakọ- . N'ime akụkọ ya, ị nwere ike depụta:
bụrụ ngwa ngwa zuru ezu, ọ dịghị achọ ntinye nke ụdị ọ bụla, naanị site na ime ya ọ ga-ekwe omume ịrụ usoro ọ bụla,
enwere ike ịbanye .ML faịlụ,
mmụba nke anya na ụzọ
ibu nke data ntinye sitere na sava ndi ozo di ka Wikimapia,
Mbupu nke map ka ndị na-agbagharị agbagharị, dakọtara na ikpo okwu dịka Apple - iPhone.
Site na ihe atụ bara uru, ọ ga-ekwe omume iji anya nke uche hụ usoro iji wepụ ozi na usoro raster site na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Otu uru ya kachasị mma bụ na onyonyo ebudatara site na ngwa a bụ georeferenced, nke na-azọpụta oge n'ịrụ ngwaahịa. Dị iche na ihe na-eme na onyonyo Google Earth, enwere ike ịchekwa ha - budata, mana chọrọ usoro nhazi usoro, nke sụgharịrị wepu oge.
Usoro usoro iji budata ihe oyiyi
Raster nhọrọ nke ebe mmasị
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata faịlụ nke nwere SAS Planet installer, na nke a ejiri ụdị ọhụrụ ewepụtara maka ọhaneze na Disemba 2018. A na-ebudata faịlụ ahụ na .zip usoro, na iji na-agba ọsọ, ha ga-ewepụ ya ọdịnaya kpamkpam. Mgbe emechara, ụzọ a na-aga na-emepe ma Sasplanet na-arụ ọrụ.
Mgbe ị na-eme ihe omume ahụ, isi nlele ngwa ahụ meghere. ọtụtụ toolbars (ndụ ndụ), na isi ngwa menu (red agba), isi na-ele (oroma), mbugharị echiche (edo edo), ọnọdụ banyere (odo odo), mmanya hụrụ nke steeti na nhazi (ụcha fuchsia).
Ka ịmalite search, ma ọ bụrụ na ị maara ihe a chọrọ ebe obibia ka map na isi na-ele bụ, ruo mgbe ị na-eru chọrọ ebe na otu nke toolbars iyi raster ọmụma a họọrọ nke a bụ Google .
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe isi iyi nke ozi, dị nnọọ pịrị ebe isi aha gosiri, e a họọrọ si: Google, Yandex, Nokia, Kosmsnimki, Navteq, Genplan nke Moscow, GeoHub, Bing, Geoportal, Yahoo! , map ndị ọzọ, akụkọ ihe mere eme, njem nlegharị anya, map ndị mmiri, Space, map ndị dị n'ógbè, OSM, ESRI, ma ọ bụ Google Earth.
Mgbe nhoputa ndi ochichi, a choputara mpaghara choro. Dabere n'otú e si ele raster anya, a na-ahọrọ ihe nkesa ahụ, maka ihe atụ e ji mee ihe oyiyi Google, ebe ọ bụ na ọ dịghị ụdị ígwé ojii ọ bụla nọ na ya.
Mgbe ahụ, a na-arụ ọrụ bọtịnụ ahụ Mgbanwe, a ga - ahọrọ ebe a na - amụ ihe site n'aka onye ọbụla. Nanị pịa otu akụkụ wee dọrọ gaa na ọnọdụ ahụ achọrọ, a na-emechi akara ikpeazụ, na windo meghere, ebe anyị ga-etinye ebe mmepụta nke onyinyo ahọrọ.
Na windo, a na-ahụ ọtụtụ taabụ, na nke mbụ n'ime ha Download, ahọpụtara mbugharị. Mbugharị ọkwa dị site na 1 ruo 24 - mkpebi kachasị elu. Mgbe ahọpụtara ihe oyiyi ahụ, na ogwe mbugharị, egosiri ọkwa ahụ, agbanyeghị, na windo a, enwere ike ịgbanwe ya. Ọ na-egosikwa ihe nkesa nke ga-esi na ya nweta ngwaahịa.
Na taabụ na-esonụ, a na-etinye nhazi mmepụta. Kpọmkwem maka raster ka a zọpụta ya na ozi gbasara ihe gbasara ohere. Na (1) igbe, oyiyi format gosiri na igbe (2) mmepụta ụzọ, igbe (3) họrọ nkesa ke (4) igbe ma ọ bụrụ na ọ bụla machie oyi akwa, na na (5) igbe ntule kpọmkwem, mgbe ahụ, hụrụ na ala nke a otu a na-akpọ Mepụta faịlụ georeferencing (6), nhọrọ kachasị mma, na nke a .w, a ka na-agbanwe àgwà ahụ site na ndabara na 95%ma emesị pịa malite,
The image e exported na JPG format, ma a pụrụ exported na-esonụ formats: PNG, BMP, ECW (mkpakọ Wavelet Enhancement), JPEG2000, KMZ maka Garming (JPEG machite), Raw (otu bitmap graphic), GeoTIFF.
Ọ bụrụ na ị na-elele folda ahụ ebe echekwara onyinyo ahụ, faịlụ 4 nwere ike ịmata, faịlụ raster .jpg, faịlụ inyeaka, mgbe ahụ jpgw (nke a bụ faịlụ ntinye na mbụ .w), na .prj jikọtara ya na onyinyo ahụ.
Raster gosipụtara na SIG
Mgbe ha mechara usoro ahụ, a na-emeghe faịlụ ahụ na ngwaọrụ GIS ọ bụla iji nwee ike ịchọpụta na oyiyi ahụ bụ ebe a chọrọ. Iji nọgide n'ihu, na atụmatụ ArcGIS Pro, a na-ebu ọkwa dị iche iche n'ụdị ọdịdị, na-egosi ebe a ga-etinye foto ahụ ọpụpụ ọhụrụ.
Mgbe ị meghere ya, ị nwere ike ịhụ na oyiyi ahụ dabara adaba, ya na ihe ndị dị na ụdị ọdịdị nke isi echiche, ya bụ, ya na ozu nke mmiri na usoro ọkpụkpọ. Osisi nke dị na onyinyo ahụ na-agbanwe na ọnọdụ nke polygon, ya mere, a na-ewere ya na ọ ga-edegharị ya n'ụzọ zuru ezu
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta data raster na ọdịnaya ndị ọzọ, dịka n'okporo ámá na ụzọ, ma jiri ha na ngwaọrụ mkpanaka maka ọnọdụ onye ọrụ ahụ, a na-eme otu usoro nke nhọrọ nke ebe mmasị.
Ihe dị iche bụ na ugbu a, a ga-ewere data ntanetị Bing, na mbipute ya okporo ụzọ - n'okporo ámá, isi ihe na-egosi nanị saịtị ndị kachasị amasị, yana aha n'okporo ámá ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nọgide na-ele anya na isi, a na-ebuba nkọwa metụtara ebe a na-amụ ihe.
Ugbu a, ọ bụrụ na achọrọ rasta mbụ ka ị nweta data nke map na saịtị nke mmasị a na-ejikarị, naanị ngwakọ - ngwakọ, bụ nke na-etinye ihe ọmụma data site na isi ebe a na-ede akwụkwọ, ya na onyinyo raster.
N'elu ogwe aka, enwere bọtịnụ ndị dị n'elu, mgbe ha na-abanye ebe ahụ, a na-egosipụta ihe niile e depụtara na map nke nwere ike ịkọwa ya na rasta. Site Google, OSM - Open Street Maps, Yandex, Rosreestr, ngwakọ Yahoo, Hibrid Wikimapia, Navteq.
Ekem, maka raster isi, Maapụ Bing - Satellite server ejiri, mgbe ahụ, a na-abanye na menu ngwakọ, na kwa ihe ndi achọrọ ka agbadoro, - nke a iji wee choputa nke nke ngwakọ nwere ihe omuma gbasara mbara igwe, n'ihi na a họọrọ ihe atụ: Google, OSM, Wikimapia, na ArcGIS ngwakọ, echiche nke raster na ebe ndị a na-anọghị na-egosi n'okpuru.
Iji chekwaa oyiyi ahụ, na data nke ngwakọ, a na-ahọrọ echiche dị ka ọ dị na ikpe gara aga, mana oge a, mgbe ana egosi ihuenyo nke ihe oyiyi, a na-ahọrọ ndị a: na taabụ atụgharị, usoro mmepụta, ụzọ mmepụta, raster base (Bing) na-etinye, na Na-ekpuchi oyi akwa - A họọrọ ngwakọ Google - yana faịlụ ntụnye gbasara gbasara ohere .w.
Mgbe usoro ahụ na-agba ọsọ, a na-emeghe onyinyo ahụ na SIG ma ọ bụ ngwanrọ nke mmasị gị, a kwenyekwara na oyiyi ahụ na data ntanetịpụtara nke Google Hybrid a na-ebupụ n'ezie. A na-egosiputa aha nke ihe ndị dị na ebe mmasị, na mgbe etinyere ọdịdị ahụ, ọ dị kpọmkwem ebe mmiri kwesịrị ịga.
Usoro nke isiokwu a nwere ike ịhụ na channel Youtube nke Geofumadas
Dika o kwere omume ichoputa, ojiji nke ngwa a bu ihe di mfe, o choghi isi ike ighota ihe omimi nke usoro na ihe omuma ndi mejuputara ya. Ya mere, a na-atụ aro iji ya eme ihe.
N'adịghị ka atụmatụ ndị ọzọ na ọrụ a nke nbudata ihe oyiyi eserese, dịka okwu ahụ Stitchmap, evolushọn nke SASPlanet nwere bụ nke nwere ike ịgbapụta agbapụta, nke etinyegoro ngwa ọrụ na arụmọrụ na mmelite ọ bụla, yana ịnweta ọtụtụ ọrụ. Emeela edemede a site na iji mbipụta kachasị ọhụrụ, site na Disemba 21, 2018, agbanyeghị, anyị na-enye gị njikọ a, site na ibe gọọmentị, nke nwere nchekwa nke nsụgharị niile nke ewepụtara kemgbe 2009.
Ekele maka SASPlanet na 10 afọ nke nọgidere.
Previous Post«Previous Echiche 5 na 5 nke BIM-GIS
Next Post Nzukọ Geospatial World - 2019Next »
Otu azịza na "Otu esi ebudata ihe oyiyi sitere na Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS imagery na isi mmalite ndị ọzọ"
Carl kwuru, sị:
ezigbo akwụkwọ ntuziaka. Onye ọ bụla chọrọ ịmalite idezi ihe oyiyi anyị na-akwado ka ị gaa na anyị fotohop madrid
maka onye ọ bụla dị n'obodo ahụ.